Sacuudiga iyo Iiraan oo ku hardamaya marin Biyoodka Baabul Mandab – Radio Muqdisho
25-kii Bishii July ee sanadkan, Sacuudi Carabiya ayaa joojisay shixnadaheedi shidaalka ee mari jiray marinka Babul Mandab kadib markii maraakiibteeda ay weerareen kooxa ka tirsan Xuutiyiinta Yeman ka dagaalama.
marin biyoodka Babul Mandab ayaa hada u muuqda qayb ka mid ah mushkiladaha u dhaxeeya wadamada Sacuudiga iyo Iiraan, kuwaasi oo ku kala aragti duwan arrimaha gobolka Bariga dhexe.
sida ay ku waramayaan dadka ka faalooda arrinta Bariga dhexe, hadii uu sii xogeeysta qilaafka Baabul mandab waxay cariiri gali doona Noolasha 104-ta milyan ee dadka reer Masar, sida uu ku waramaya wargayska Arab Post.
Sacuudi Carabiya ayaa arrinkan ku edeeysay Dowladda Iiraan oo sida ay ku sheegtay bayaan ka soo baxay dhawaan in Iiraan ay doneeysa in marinka Baabul mandab uu noqda mid laga guura oo ay ka wareegtaan marakiibta sida Badeecadaha kala duwan.
kooxaha Xuutiyiinta ayaa ku gudba meel u dhaw Babul Mandab iyo xeebta Yeman markibta Isbaheysiga ee ay ku rakibanyahiin Booyadaha batroolka ee u safra Bariga Dhexe ilaa Yurub iyaga oo sii maraya Kanaalka Suweys.
Sacuudi Carabiya ayaa go’aansatay in ay dib u soo celiso shixnaddahedii shidaalka kadib markii ay isbahaysiga millatariga ee Yemen ka dagaalama ee uu Sacuudiga hogaamiyo ay qaadeen weeraro dheeri ah oo lagu beegsanayay saldhigyada Xuutiyiinta.
Sida laga soo xigtay wasiirka tamarta Sacuudi Khaalid Al-Falix, tallaabooyinkan ayaa waxaa loo qaaday sidii loo badbaadin lahaa maraakiibta shixnadaha sida ee laga leeyahay wadamada isbahaysiga ee ku yaal koonfurta Badda Cas.
Wargeyska Arab Post ayaa shaaca ka qaaday in Sucuudi Carabiya ay ku cadaadineysa Suuqa Saliida adduunka in lagu gacansiiyo dagaalka ay kula jiraan Xuutiyiinta ee ka socda Yemen.
intii u bilowday dagaalka Xuutiyiinta ay ku beegsanayaan Marakiibta wadamada Isbaheysiga waxaa lagu waayay qiyaastii 3.8 milyan oo foosto oo saliid ah iyo alaaba kale oo intooda badan u socday wadamada Yurub, Aasiya iyo Maraykanka.
sida la sadaalinaya tallaabadani waxay horseedi doontaa koror ku yimaada sicirka saliidda, iyadoo Masridana ay ka walwalsanyahiin mushkiladaha ka taagan marin biyoodka Baabul mandab, taas oo hadii ay sii socota si toos ah u kicin doonta qiimaha saliidda qeyba kamid ah caalamka.
Qaxooti Soomaali ah oo laga daadgureeyay dalka Yeman